Mifindra amin'ny tranokala iPhoto mankany amin'ny fampiharana Photos vaovao amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Miguel Angel Juncos | | Apple, OS X Yosemite, Tutorials
Hatramin'ny nanambaran'i Apple ny faran'ny fanohanana ny fampiharana Aperture sy ny fanjavonan'ny iPhoto tanteraka ho an'ny Saripika, niandry ny mpampiasa rehetra raha toa ka tena mendrika izany fanovana izany ary jereo raha afaka afindra ny rakitsary misy ny sary amin'ny fampiharana vaovao ... tsara, tonga ny fotoana.
Izao OS X Yosemite 10.10.3 Navoaka tamin'ny fomba ofisialy, tonga ny fotoana hieritreretana ny fifindra-monina ny tranombokinao sary avy amin'ny iPhoto taloha mankany amin'ny fampiharana Photos vaovao. Ny fifindra-monina mihitsy dia tsotra, na dia misy fomba maro hanatanterahana izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasongadinay ny iray amin'ireo fomba tsotra sy tsotra indrindra mifindra trano famakiam-boky iPhoto amin'ity fampiharana Photos vaovao ity.
Ireo dingana tokony harahina hifindra ny tranomboky dia izao manaraka izao:
Ny dingana voalohany voalohany dia ny mamaky ny tranombokinao iPhoto aloha mba hanafoanana ireo rakitra duplicate ary hanavao ny metadata tadiavinao amin'ny sary sasany
Akatona ny fampiharana Photos sy iPhoto
Misokatra ~ / Sary ary tokony hahita tranomboky roa farafaharatsiny farafaharatsiny: ny iray ho an'ny fampiharana Photos vaovao ary ny iray hafa izay ho tranomboky iPhoto taloha
Hanao tsindrio indroa ao amin'ny Photo Library izahay ary tokony hanomboka ny fampiharana. Eto isika dia hanamarina izany Foana ny fampiharana sary, midika izany fa fametrahana vaovao na fanavaozana ny OS X Yosemite 10.10.3
Raha foana ny tranomboky Photos araka ny nanamafisanay ny dingana 3, dia tsy maintsy esorina ao amin'ny base data ~ / Images Library. Ataonay izany mba hialana amin'ny famakiam-boky marobe ho an'ny fampiharana Photos ary amin'izay dia hialana amin'ny anarana hafahafa toa ny "Photo Library 2"
Izahay dia hitantana ny fampiharana Photos ary tokony hanondro izany fa ny sary dia tsy hita ao amin'ny rafitra »Photo Library«, izay marina hatramin'ny nanombohantsika nanala azy
Tsindrio ny Open hafa ...
Hisafidy ny tranomboky iPhoto izahay ary tsindrio eo amin'ny Select Library
Andraso ny angon-drakitrao sy ny sary rehetra avy amin'ny iPhoto mba hafarana ao amin'ny fampiharana Photos vaovao
Mbola afaka manokatra iPhoto ihany isika, saingy tadidio fa izay fanovana natao tamin'ny iPhoto manomboka izao dia tsy hiseho amin'ny fampiharana Photos, satria tranomboky roa tsy miankina izy ireo. Azonao atao ny mamafa ny tranomboky iPhoto taloha raha vantany vao nanamarina izany ianao ny zava-drehetra dia nifindra monina tamim-pahombiazana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X Yosemite » Ahoana ny fifindra-monina ny tranomboky iPhoto anao amin'ny fampiharana Photos vaovao ao amin'ny OS X
Paul Salgueiro dia hoy izy:
Ankehitriny dia manana tranomboky, sary ary iPhoto 2 izahay. Raha ny amiko, ny tranomboky iphoto dia manana habe 255GB ary rehefa manafatra azy amin'ny Photos dia namorona tranomboky 243GB hafa. Izy ireo dia miorina amin'ny kapila ivelany 1,5TB ary ny zava-misy dia talohan'ny namoronana ny tranomboky Photos dia nanana 600GB hita tamin'ny kapila ivelany aho ary raha vao noforonina tamin'io kapila ivelany io ihany ny tranomboky Photos dia mbola manana 600GB maimaim-poana aho.
-Afaka mamafa ny tranomboky iPhoto ve ianao nefa tsy misy atahorana hisy fiantraikany amin'ny angona ao amin'ny tranomboky Photos?
Valiny tamin'i Pablo Salgueiro
Nanome vahaolana anao ve izy ireo?
haf dia hoy izy:
fanontaniana iray raha sanatria afaka manampy ahy ianao, mifindra monina amin'ny tranomboky amin'ny andro voalohany, nefa tsy mandinika sary mihetsika, hitako izao fa manana maro aho, ahoana no fomba hamafana azy ireo, misy fomba hanaovana azy ve?
Mamaly an'i jaf
Angelo glaber dia hoy izy:
Ampidiro ny trano famakiam-boky na ny App miaraka amin'ny fanalahidy Alt ary azonao atao ny manamboatra ny famakiam-boky iphoto ary avy eo mifindra miverina mankany amin'ny Photos
angeloglaber@icloud.com Raha tsy mahazo fampandrenesana momba an'io aho, arahaba.
Valiny tamin'i Angelo Glaber
Salama, fanontaniana iray: aorian'ny famindrana ireo sary amin'ny fampiharana "Photos" vaovao azo esorina amin'ny "iPhoto" ve ilay fampiharana taloha?
Erwin Alexis Lopendia Castillo dia hoy izy:
Mackeros kely tsara, nohavaoziko tato ho ato ny 10.10.3 ary nafindra ny tranombokiko iPhoto ho any amin'ny App Photos vaovao, tsy nahatratra ny "hetsika iPhoto" sy zavatra hafa aho, saingy amin'ny ankapobeny dia mahomby ny asany ary mora ampiasaina, saingy manana fisalasalana sasantsasany Miaraka amin'ny zava-misy manokana, ny tranombokiko dia manana lanjany 140GB, ka amin'ny fanafarana sary dia nangataka ahy izy mba hividy toerana ao amin'ny iCloud, saingy tsy tiako izany, noho izany dia nonoiko io safidy io ary noho io antony io ny lanjan'ny ny tranombokiko sary dia hijanona eo an-toerana ary tohanan'ny Time Machine. Amin'izany, ny «tsy nampoizina» tsy dia nahafinaritra ahy dia nitondra ahy rehefa niditra aho hijery ny sariko ao amin'ny AppleTV amin'ny safidin'ny Computers, misafidy ny Macbook-ko sy ny lisitry ny fizarana (mozika, fandaharana amin'ny fahitalavitra, horonan-tsary ...) nanjavona ary ny safidy hijerena ireo sary avy amin'ny tranombokiko eo an-toerana, ary ao amin'ny fampiharana AppleTV Photos dia tsy mijery afa-tsy sary sy rakikira nozaraina aho, izany no antony namoizako andraikitra lehibe "Tsy afaka miditra amin'ny tranombokiko eo an-toerana amin'ny AppleTV aho miaraka amin'ity fanavaozana ity", olona iray nahita vahaolana ???
Valiny tamin'i Erwin Alexis Lopendía Castillo
dinoriz dia hoy izy:
hitanao ve ny vahaolana?
Mamaly an'i dinoriz
Monica Muñoz dia hoy izy:
Tsy afaka manokatra ny rindranasa iphoto aho, milaza amiko fa mila manavao ny OS Yosemite aho na mitady azy ao amin'ny fivarotana app, saingy manana ny vaovao farany 10.10.3 aho. Rehefa miditra amin'ny fivarotana app aho ary mitady iphoto dia lazainy amiko fa tsy misy ho an'ny tsenan'i Mexico.
Mitady azy amin'ny fividianana aho ary tsy manavao azy, fantatrao ve ny antony?
Valiny ho an'i Mónica Muñoz
Heveriko fa ho olana fametrahana izany, namaha azy ve ianao?
Manana olana mitovy amin'izany aho ary mila ny sariko maika hanolotra tranga iray amin'ny asako, tsy afaka miditra amin'ireo sariko teo aloha aho avy amin'ny iphoto satria nanavao ny yosemite aho, rehefa nitady azy tao amin'ny fivarotana fampiharana aho dia nilaza tamiko fa tsy misy io ho an'ny tsena Shiliana
Mamaly an'i jose diaz
Alexandra Serna dia hoy izy:
Salama, tsy fantatro fa hanjavona iphoto rehefa nametraka ny Yosemite aho, ary tsy namindra ny sariko tamin'ny fampirimana hafa aho. Misy azo atao ve ny mahazo azy ireo? Sa tokony hiandry an'i Apple hanapa-kevitra ny hanavao ny iphoto any Mexico aho?
Valiny tamin'i Alejandra Serna
Salama, manana olana lehibe aho nanavao ny solosaina ary iphoto nanjavona izao sary izao fotsiny ary tsy hitako na aiza na aiza ny sariko rehetra, afaka misy olona manampy ahy azafady
Luis Roberto dia hoy izy:
Veronica! Izaho dia nanana olana mitovy amin'izany, fa ny vahaolana dia ny fandehanana amin'ny application, tsindrio havanana amin'ny iphoto dia ampidiro ny "aseho ny atiny fonosana" dia ampidiro ny folder "macos" dia rehefa miditra ianao dia hahazo zavatra milaza hoe "iphoto" tsindrio ary dia izay .. izay rehetra nanananao tao amin'ny iphoto. Manantena aho fa afaka nanampy anao. salama!
Mamaly an'i luis roberto
Misaotra anao!!! namonjy ny aiko ianao !! Very ny sariko rehetra !!!
Karliet dia hoy izy:
Salama!! Toy izany koa no nitranga tamiko, nanavao ny solosaina ho any Capitan aho ary nanjavona iphoto, tsy misy afa-tsy ny sary masina ary tsy hitako ny sariko iPhoto, matahotra aho fa rehefa miditra ny sary famantarana izay voninkazo aho dia mahazo be sary toa ny hoe Raha vao voalohany nametraka an'io fampiharana sary io aho, ary rehefa manaraka ny dingana dia mikorontan-tsaina aho very ny zava-drehetra ... Ankehitriny ny safidy hafa, rehefa miditra fampiharana - iPhoto - atiny - rehefa tonga any MacOS aho ary tsindrio iPhoto , boaty fotsy ihany no miseho rehefa mameno angona avy amin'ny rafitra fandidiana na zavatra toy izany, miaraka amin'ny litera sy data izay tsy fantatro hoe inona izany ary tsy misy zavatra hafa mivoaka avy eo ... inona no tokony hataoko?
Valiny tamin'i Karlliet
Apple dia manjavozavo isan'andro, ny mamafa ny iphoto miaraka amin'ny sary dia adala, ny fampiharana dia banga eo akaikin'i iphoto, tsy misy fampitahana.
Ahoana no tsy nanampian'izy ireo ny fampiasa izay mifangaro amin'ny icloud raha manao an'ity frankestein ity ianao
Montdelcas dia hoy izy:
Misy olona afaka miteny ahy ny fomba hanafarana ny sary amin'ny Photos izao? Talohan'izay, tao Iphoto, nandidy azy ireo tamin'ny hetsika aho, ankehitriny, tsy maintsy mamorona rakikira ho an'ny vondrona sary iray aho, heveriko ???
Mamaly an'i Montdelcas
Nanjavona aho IPHOTO !!!! Adala ny sariko taloha dia ao amin'ny Finder miaraka amin'ny mozika sy ny zava-drehetra ..
Sady inona no fantatra ...
Gabriela Eguiguren dia hoy izy:
Ahoana raha tsy te-hanavao fanavaozana aho, tazomy ny iPhoto misy ahy ankehitriny, ary aza mifindra amin'ilay Photo vaovao?
Manana iPhoto amin'ny Mac aho, miaraka amina rakikira sy fampisehoana slide, izay nitaky asa sy taona maro niarahana ary tiako ny hitazomana azy ireo tsy miova.
Manana sary amin'ny iPad-ko aho ary tena loza izany.
Valiny tamin'i Gabriela Eguiguren
Serra serra dia hoy izy:
Nahita vahaolana ve ianao?
Tsy te-hanavao sary ihany koa aho, satria manana sary mihetsika sy sary misy marika marobe izay fantatro fa ho very aho rehefa manavao ny sary, saingy mila manavao ny solosainako amin'ny Yosemite ary tsy haiko ny fomba hanaovana azy. izany mba tsy hahavery ny asako rehetra any iphoto.
Valiny tamin'i Sergio Serra
Sebastian chandia dia hoy izy:
Azoko esorina ve i Iphoto aorian'ny fametrahana sary? tsy very ny sariko?
Valiny tamin'i Sebastian Chandia
lupitagcartphotography dia hoy izy:
Salama! Misy olona afaka miteny amiko raha azo atao ny mamerina ny sariko avy any Iphoto ankehitriny satria efa tsy eo intsony ny fampiharana? Nanana sary maro aho ary tena antitra ary tsy manana backup. Ampianaro azafady !!!
Valiny amin'ny lupitagcartphotography
Ny vahaolana dia mankany amin'ny application ianao, tsindrio havanana amin'ny iphoto dia mankany amin'ny "aseho ny atiny fonosana" avy eo ianao mankany amin'ny folder "macos" dia rehefa miditra ianao dia hahazo zavatra milaza hoe "iphoto" dia tsindrio ary dia izay .. izay rehetra nanananao tao iphoto. Manantena aho fa afaka nanampy anao. salama!
foitrany dia hoy izy:
Nanandrana nanao an'io aho ary ny hany ananako dia hira vitsivitsy avy amin'ny iPhoto! Tsy misy sary. Manana fampirimana antsoina hoe iPhoto library ary ao aho manana sary 110GB. Miezaha mamindra ity fampirimana ity amin'ny fampiharana sary vaovao ary miteny amiko izy "Manavao ny famakiam-boky" iPhoto library.photolibrary "miaraka amin'ny fitaovana Apple iPhoto Library Update.", Sintomy ny fitaovana ary andramo havaozina ny fitehirizam-boky ary milaza izy fa "Afaka mamaky sokafy miaraka amin'ny kinova iPhoto ankehitriny ary tsy mila miomana miaraka amin'ity fitaovana ity. » Fa tsy azoko vohaina !! ny ataoko?
Mamaly an'i Navela
Mandehana any amin'ny Finder. Tsindrio mandeha - Manorata
Hitanao ao ny tranomboky iPhoto anao.
Raha manokatra ny app Photos ianao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra alt, dia hamela anao hisafidy ny tranomboky (izay hitanao) ary hampiditra azy amin'ny sary
Diony dia hoy izy:
Ahoana no ahafahanao manampy fampahalalana (lohateny, teny lakile, famaritana) amina vondron-tsary ao amin'ilay Sary vaovao. Ao amin'ny Ifoto dia tao amin'ny menio Photos fanovana marobe?
Valiny tamin'i Dioni
Julie dia hoy izy:
Afaka manampy ahy ny fonony, nohavaoziko tamin'ny yosemite ny mac-ko ary very ny sariko, kitikao ny iphoto ary tsy misy. Ary, ao amin'ny fivarotana fampiharana dia milaza fa tsy misy fampiharana ho an'i Mexico. Miatrika trauma aho fa tsy misy ny sariko, very azy mandrakizay ve aho? Ahoana no hamerenako azy ireo?
Valiny tamin'i Julie
Tsy nanampy ahy izany, misokatra foana tsy misy tranomboky sary
Misaotra, raha niasa
Joaquim Fabregat dia hoy izy:
Adala amin'ny fanavaozam-baovao rehetra narahin'ny iphoto ary amin'ity indray mitoraka ity dia manapa-kevitra izy ireo fa tsy ho sitrana intsony ny asanay mandritra ny ora maro ary toa tsy ampy izany, aza alaina ny aperture fa fisolokiana io ka mividiana ity app ity. Iza no mamaly ... Tsy misy
Valiny tamin'i Joaquim Fabregat
Salama, nametraka ose ny kapiteny aho. fa tonga dia voafafa ny IPHOTO-ko sy ny sary rehetra natobiko tao ... afaka manampy ahy ve ny olona sasany? Misaotra anao!! =)
Inona ny rindrambaiko hafa hapetrako hamerina iPhoto?
Salama! Misy olona afaka manampy ahy ve…
Nohavaoziko tamin'ny mac farany ny mac-ko.!
Ary ampidino avy ao amin'ny selako ny sariko mankany amin'ilay "sary" fampiharana vaovao
Avy eo te hanokatra iphoto aho hanitsiana azy ireo ary nilaza tamiko izy fa te-hifindra monina izy ireo, ary izy
Tsindrio «ok» ary nafindra tany «iphoto» izy ireo te-hanokatra ny iphoto ary hita fa tsy misy intsony !!!
Te-hahita ny sariko avy amin'ny findaiko izay nakariko ho sary dia nanjavona izy ireo !!!
Ahoana no hamerenako azy ireo ???
Ampio mba !!!
Zavatra tena hafahafa no mitranga amiko. Rehefa misafidy ny rakitra iPhoto ampidirina, rehefa mahatratra 8% ny fanafarana dia milaza amiko fa tsy manana alalana aho ary mikatona.
Misy mahay mamaha azy ve?
Valiny tamin'i José Ramon
Toy izany koa no mahazo ahy ... nahita vahaolana ve ianao?
Ary nanao fitsapana izay niasa ho ahy ihany aho tamin'ny farany. Alefaso amin'ny sary X ny sary iPhoto rehetra avy eo ampidiro amin'ny sary ireo sary rehetra.
Ny marina dia niasa ho ahy izy io.
Heveriko fa tsy nahomby tamin'ity fifindra-monina ity i Apple, satria nandany vola tamin'ny fisedrana sy fotoana maro aho, ary ny ratsy indrindra dia nandamina izay rehetra efa nananako tamim-pitiavana be dia be tao amin'ireo rakipeo samihafa. Anjarako izao handamina ny zava-drehetra.
Mikorisa .. ampio aho azafady amin'ity! Heveriko fa very ny sariko iPhoto rehetra rehefa nohavaoziko ilay rindrambaiko mac vaovao .. Nipoitra tampoka ho toy ny fampiharana vaovao ny sary, fa ny sary izay notehiriziko tao dia ireo izay nampifanarahina tamin'ny Apple ID ahy ary hita fa izy ireo ahy iPhone !! Manana ireto sary ireto ihany aho ary ireo sary natsangako tamin'ny iPhone dia tsy hita !!
Ahoana no hamerenako azy ireo! Manantena ny emoticon frown fa afaka manampy ahy ianao!
Hey misaotra betsaka!
Misy fomba iray hamerenana ny anarana sy ny fandaminana ny rakikira izay azoko tao amin'ny iPhoto ary handamina azy toa izany ao amin'ny Photos vaovao?
Tena nalamina be tamin'ny anaran'ny rakikira izy io ary ankehitriny ny sary vaovao dia hofafako izy rehetra ary atambatra ao anaty rakikira iray ihany ny zava-drehetra.
Ahoana no hametrahako fampahalalana (lohateny, teny lakile, famaritana) amina vondron-tsary ao amin'ilay Sary vaovao. Ao amin'ny Ifoto dia tao amin'ny menio Photos fanovana marobe?
Ahoana ny fomba ahazoana ireo sary mihetsika namboarina tamin'ny iphoto? Rehefa manokatra ny sary aho dia miseho ny sary fa nanana sary mihetsika maro aho ary tsy nisy niseho.
frankyleonard dia hoy izy:
Nisy teknisianina namafa ny app iPhoto fa namela ilay fonosana info 32 GB izay tsy afaka nosokafako izao ary tsy fantatro raha nafarana tanteraka tao anaty Photos izy io. Toy ny ataoko?
Mamaly an'i frankyleonard
Salama, nafindra ny sary avy amin'ny IPHOTO mankany amin'ny PHOTOS aho, ary ny zava-nitranga izay nananako ny zava-drehetra mba tsy hifindra monina ary toa tsy mandeha amin'ny laoniny ny sary rehetra. Misy ve ny fomba fakana tahaka ny zava-nitranga ary afindra amin'ny sary na vahaolana amin'izany mba tsy voatery hamorona azy ireo indray? Isaky ny misy fiovana toy izao, dia zavatra mitovy ve no hitranga? Tsy hitako mazava izany.
Salama, manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, voafafa tao amin'ny mac-ko ny iPhoto, nipoitra ireo tranomboky fa tsy mamela ahy hanokatra azy ireo amin'ny sary, nitady aho fa tsy mahita iPhoto na aiza na aiza hahafahako mamerina azy io, tsy manao izany aho Fantaro ny fomba hamahana ity olana ity, ary tsy tiako ho very ireo sary ireo.
Salama, zavatra mitovy amiko no nanjo ahy, rehefa nametraka El Capitan aho dia tsy avelako hanokatra iPhoto aho, milaza amiko ny hanavao izany fa tsy ao amin'ny magazay meksikana na amerikanina intsony, fa ampidiro ny screensaver raha hitanao ny rehetra amin'izy ireo! Rehefa manafatra azy ireo amin'ny sary aho dia tsy miraharaha intsony ny hahafoana ny baiko, fa te-hamerina azy ireo fotsiny!
Antoinette dia hoy izy:
Amiko raha lany ny zava-nitranga rehetra tao amin'ny sary, amin'ny fanavaozana ny osx capitan vaovao,
fa ny tadiaviko dia ny hahafahako mampita hetsika misy ny sariko (hoe raha miseho amin'ny osx capitan) ary album izany.
Tsotra be ity sary nataoko ity, ny hetsika ihany no nalaiko ary nandefa rakipeo aho. Ahoana no hataoko izao ???
Valiny tamin'i Antonieta
Salama maraina Miguel Angel
Manaraka an'ity kofehy ity aho mandroso mankany High Sierra.
Rehefa manandrana manokatra ny iPhoto Library (avy amin'ny rafitra fiasa taloha, 5 taona talohan'izay, izay niara-niasa tamin'i iPhoto) miaraka amin'ireo sary vaovao (vao navaozina ho lasa sierra avo aho tamin'ny rakotra, kopia madio) dia tsy manokatra azy io. Nanaraka ireo dingana mahazatra hazavainao amin'ny voalohany aho. Manomboka manokatra ny rindranasa izy io, mamorona ny famakiam-boky, saingy aorian'ny 8% amin'ny famoahana azy dia misy ny lesoka milaza amiko fa mila toerana bebe kokoa amin'ny kapila izy (rehefa azoko maimaim-poana, 1,2 Teras ...)
Tsy manana safidy hanafatra ny sary aho satria tsy manana milina hafa manana rafitra OS taloha.
Faramparan'ny taona 2012 iMac, 16 MG RAM, i7, FusionDrive, 1,3TB.
Misy fanampiana azafady ???
Izaho koa manana olana hafa, amin'ny fampiasana ny Time Machine dia te-hanao backup ary rehefa nanomboka ny fandidiana dia nangataka ny hamafana ny kapila ivelany ary avy eo dia tsy nanao backup intsony satria nilaza fa tsy misy toerana ary 5TB io kapila, ary ankehitriny ny disk ivelany dia tsy eken'ny solosaina rehetra, iza no mahalala izay azoko atao ??? MISAOTRA
Miverina ny tsaho momba ny fanombohan'ny Apple ny keyboard keyboard backlit tsy misy tariby